ASPLENIUM (KOSTENETS): BEERASHADA IYO DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Fern Asplenium: sida loo koro guriga
Asplenium waa mid ka mid ah noocyada kala duwan ee fern, taas oo inta badan laga helay beerta guriga. Sababtoo ah caleemo qallafsan, cillado qalafsan, waxay leedahay sifo qurxin sare leh waxayna ku habboon tahay gudaha guriga dhexdiisa. Waa wax aan macquul aheyn in loo yeero aslenium geedka aan qabin, laakiin haddii aad raacdo talooyinka agrotechnik qaarkood, waxaad ku kori kartaa aqalka dhirta lagu koriyo ama guriga.
Ma taqaanaa? Magaca "Asplenium" wuxuu ka yimid Giriigga waxaana loo tarjumay sida: "a" - "maya", leexasho - "beertii". Magaca ayaa lala xiriirinayaa waxyeelada lagu soo oogay ee ku habboon. Dhulka Asplenium waa Koonfurta Afrika, tropics ee Asia iyo Oceania.
Qolalka Aslenium Fern: noocyada iyo sharaxaadda
Asplenium, oo sidoo kale loo yaqaan fowdada Kostenets, ayaa iska leh cirridka cuncunka dilka ee qoyska Kossentse. Cirku wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 700 nooc oo sii kordhaya ee kuleylka, dabiiciga iyo dhulalka kulaylaha. Duurjoogta, dhirta ayaa sida qaalibka ah ku qulqulaya dildilaaca dhagaxyada ama ku kora derbiyada lebiska. Asplenium waxaa laga heli karaa waddamada qaar ka mid ah Yurub, iyo sidoo kale Hindiya, New Zealand, Australia, Madagascar iyo wadamo kale oo ka tirsan koonfur bari Africa.
Dhammaan noocyada asymenium waxay u egyihiin kuwo kala duwan: waxaa jira epiphytes, lithophytes iyo dhirta dhulka, oo leh sharraxaad kala duwan ee dabeecadaha dibadda. Dhererka dhirku wuxuu noqon karaa dhowr mitir oo mitir ilaa laba mitir, iyo taarikada caleenta, ama frozen, waxay noqon kartaa mid adag, oo si ba'an loo fujiyey, oo leh petioles gaaban oo dheer ama la'aantood. Nidaamka asaasiga ah ee noocyada kala duwan ee asplenium sidoo kale waa kala duwan yahay: laga bilaabo rhizomes dillaaca ilaa xididdada xoogga gaaban ee xoogan oo daboolay qolfaha bunni. Astaamo caadi ah waa qaabka qaabka isboortiga (sorus), oo ku yaalla hoose ee frond.
Kala duwanaansho la'aanta waxaa laga arki karaa oo kaliya duurka, halkaas oo dhammaan noocyada ay ku koraan xaaladaha deegaan dabiici ah. In beerta guriga, kaliya dhowr darsin waa caadi, kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu badan waa:
Asplenium viviparous - aad u qurux badan oo aan caadi ahayn noocyada jilicsan ee dabiiciga ah. Qodobbada ayaa qaxaya wyai curyaamiyay, afar-pinnate, on petioles gaaban. Dhererka calaamadaha caleen wuxuu gaari karaa 60 cm, ballaadhkuna waa ilaa 20 cm. Muuqaal astaamo ah ee Aspenium viviparous waa burooyinkeeda, oo horumarinaya dhinaca sare ee caleen, iyo kadib markii koritaanku u dhaco dhulka iyo xididka. Meelaha kaliya ee fermiska Aslenium ku nool viviparous waa Bariga Afrika, jasiiradda Madagascar.
Asplenium Onionaceous - Noocyada kale ee xayawaanka ah ee fern, waxay la mid yihiin kan hore, laakiin taarikada caleenta way ballaaran yihiin waxayna isku dhow yihiin midba midka kale. Vayi waa siddeed-pinnate, on petioles gaaban, in ka badan mitir dheer. Noocyadaasi waxay sidoo kale leeyihiin burooyinkeeda buraashka ah ee xididada marka ay dhulka ku dhuftaan. Dhulka dhul-beereedka soodheerka ah waa gobollada qoyan ee Australia, India iyo New Zealand.
Asplenium South Asia - Feerka weyn, epiphytic or semi-epiphyhytic fern. Waxay leedahay mid toos ah oo ciriiri ah oo yar yar oo mitir leh oo lagu ururiyey meel cufan. Taarikada caleenta waa dib-u-daboolka, suunka, sida adag, gaaban gaaban. Dusha sare ee xaashida waa mid yar oo la jeexjeexo, sida haddii uu ku dhejiyo xididka dhexe. Nidaamka xididku wuu gaaban yahay. Duufaanku wuxuu ku koraa aagagga xeebaha ee Australia, dabagalka gaboobay ama jirridda.
Asplenium Scolopendry - La ogsoon yahay inay bannaanka u yihiin "carrabka geedka", waxay u egtahay layskaga dhirta asplenius dhirta, cirifka oo keliya ayaa dillaacay, oo foororsanaya dhulka. Tani waa noocyada ugu caansan ee dhaqanka, oo leh tiro badan oo kala duwan iyo Beelaha. Foomamka ugu caansan waa ferns oo leh ciriiri adag ama saxaro caleen ah.
Qalabka Asplenium - Tani waa noocyada epiphytic, oo la mid ah Koonfurta Aasiya, laakiin waxay leedahay cabbir ka badan oo isku dhafan iyo rosette furan oo caleemo ah. Dabeecadda, qashinka asplenium waxaa lagu qaybiyaa dhulka ka soo jeeda Malawigada Malibiyada ee Bariga Afrika, iyo sidoo kale Madagascar iyo Hawaii.
Doorashada asplenium ee qolka
Goobta si haboon loo doortay - furaha ah si loo helo beeritaanka guulaha ee aslenium ah ee guriga.
Asplenium ma u baahan tahay iftiin?
Asplenium waa fernan-jacayl jecel oo uma dulqaadan iftiin dhalaalaya, iftiinka qorraxda on taarikada caleenta waa contraindicated. Markaad dooratid meel aad u sii kordheysid asplenium, waxa fiican inaad bixiso doorashooyinka daaqadaha ee woqooyi, woqooyi galbeed iyo dhinaca woqooyi bari. Haddii dhinaca woqooyiga aysan jirin suurtagal ah in la gooyo dhirta, markaa waxa fiican in la dhigo weelka oo leh masaafo saddex mitir oo daaqad ah.
Heerkulka ugu wanaagsan iyo qoyaanka koritaanka
Asplenium waa warshad thermofilic ah, daryeelkiisu wuxuu ku lug leeyahay sameynta heerkulka hawada ee ugu wanaagsan ee warshadda guriga. Heerkulka kaas oo fermiska dareemo raaxo + 21 ... +24 ° C. Waxa uu dareemi doonaa heerkul sare iyo hawada qalalan si xun - saxanka caleen ayaa qalajin doona, fronds cusub ayaa joojin doona sii kordhaya, taas oo horseedi doonta dhimashada geedka. Ma jeceshahay wax qabadka Asplenium iyo isbeddel deg-deg ah oo heerkulka, sidaas darteed hawadu waa inay taxadaraan. Waa macquul in la yareeyo heerkulka inta lagu jiro xilliga qaboobaha, laakiin aan ka yareynin +16 ° C, haddii kale dhirta ayaa jabin kara caleemaha.
Caano si ay u koraan asplenium
Noocyada xayawaanka ah ee asplenium waxay doorbidaan iftiin yar, ciidda dabiiciga ah, ciidda dabacsan oo lagu daray waxyaalo dabiici ah. Isku dar ah caws iyo dhul caleen, humus, peat iyo ciid ayaa ku haboon sida substrate ee saamiga 2: 3: 3: 1: 1. Waxaa sidoo kale wanaagsan in lagu daro dhuxul yar oo dhuxul ah, shinbiraha dhoobada ah iyo roodhida sphagnum ee dhulka. Wixii dhirta epiphyhytic, isku dar ah ee dhoobada peat leh peat, fiber qumbaha iyo jilif geed leh ayaa lagu talinayaa. Carrabka dukaanka ah ee loogu talagalay orchids ayaa sidoo kale ku haboon.
Noocyada cirbadeynta iyo dhalmada ee asplenium qolka
Iyada oo ku xiran nooca asplenium, hababka iyo qaababka wax-soo-saarku way kala duwan yihiin. Noocyada Viviparous waxay ku dhalaan burooyinkoodii yaryar ee aasaasiga ah ee dhulka, dhammaan kuwa kale - iyada oo loo qaybinayo unugyada boqoradda. Xaaladda dambe, ferns kaliya dadka waaweyn ayaa loo qaybin karaa. Tan waxaa sida caadiga ah la sameeyaa iyada oo la sameeyo qaliinka ilmo galeenka guga. Xididku waa in la gooyaa si toos ah laba ama afar qaybood, sidaa daraadeed dhagax walba wuxuu u dhexeeyaa dhowr dhibcood oo koritaan ah. Ka dib qaybinta geedo isla markiiba u baahan tahay in lagu beeray dabacsan, ciid qoyan.
Hoyga, aslaniga ayaa sidoo kale lagu faafin karaa by beerashada dhirta. Si arrintan loo sameeyo, si tartiib ah uga xoqdo qaadashada saxan ka soo duuban xaashida xaashida xaashida. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero dhirta guga dusha sare ee peat peat. Heerkulka hawada ee biqilka feerka waa inuu ahaado ugu yaraan + 22 ° C. Cirbadaha lagu daboolay dhalooyinka ama filim si ay u ilaaliyaan qoyaanka. Ka dib markii geedo u muuqdaan, waxay yihiin kuwo khafiif ah, tegaya fogaan ah 3 cm Saddex wiig ka dib dhirta waxaa loo wareejiyaa weelal gooni ah. Wixii dabiiciga ah, dheriyo dhaadheer oo yar ayaa ku haboon, kaas oo lakabka biraha ka samaysan yahay dhagaxyada ama dhoobo dhoobo la dhigo ka hor intaan la beeri. Substrate noocan oo kale ah waa mid aad u dabacsan oo aan degganeyn, sidaas darteed, si loo helo fiicnayn, ferniga ayaa lagu xareeyey dherer leh qaab wareeg ah. Haddii ay lagama maarmaan tahay in la dacaayo qulqulka xayawaanka, ka dibna burooyinkeeda xayawaanka ah ee u bislaaday oo la waayay, waxay u baahan yihiin in lagu cadaadiyo ciidda iftiinka ah ee hodanka ah. Ka dib markaa, ku rid weelka dhulka hoostiisa muraayadda ama filimka loogu talagalay microclimate optimal. Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha kowaad waxay u muuqdaan, macnaheedu waa fermiyadu waxay qaadatay xidid.
Waa muhiim! Marka laga beerto geedo asplenium aan la tamped leh ciidda iyaga ku wareegsan. Caleemaha dhirta sida ciid dabacsan oo ay neefsan karaan, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ka sameysid meelo dhawr ah oo dheeraad ah oo ku jira dheriyada.
Daryeelka sigaarka guriga
Qolka ubaxa Asplenium maaha warshad fudud oo lagu daryeelo. Wixii beerashada, waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah loo ilaaliyo jawi la mid ah deegaanka dabiiciga ah ee fern.
Sidee loo dhisaa asplenium
Berrinka biyuhu waxay u baahan yihiin oo kaliya diirimaad, jilicsan, difaac biyo ah. Tani waxaa la sameeyaa labadii maalinba mar si habsami ah sida joogtada ah ee loo ilaaliyo qoyaan laakiin aan lahayn carrada qoyan. Dhibaatada biyaha iyo qalajinta labadaba lama aqbali karo - tani waxay horseedi doontaa dhimashada asplenium. Xilliga kulaylka, kuleylaha ayaa kor u kaca, xilliga jiilaalka waxay hoos u dhacdaa. Sidoo kale, dhirta si joogto ah u baahan yihiin qoyaan sare, taas oo noqon lahaa ugu yaraan 60%. Qalalan aspheniumka qalalan. Sidaa darteed, mar mar waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhirta biyo kulul xagaaga iyo si tartiib ah u tirtiro caleemaha maro qoyan xilliga qaboobaha.
Waa muhiim! Ha u dhigin asplenium meel u dhaw batariyada iyo meelaha dabka lagu shido.
Dhalinyarada aspleniums gaar ahaan u baahan yihiin in la quudiyo marxaladda koritaanka firfircoon iyo formation of caleemaha. Muddadan, inta badan laga bilaabo Abriil ilaa Sebtembar, xalka bacriminta macdanta waxaa lagu dabaqaa xididka laba jeer bishii. Dhirta qaangaarka ah waxaa la quudin karaa hal mar bishii, xagaaga, oo leh Bacriminta dhirta gudaha.
Fern Asplenium uma baahnid manjooyin joogto ah si loo abuuro baadiyaha. Ciriiri caato ah ayaa leh foomka saxda ah waxayna si madaxbanaan u sameysaa rosette qurux badan. Kaliya saxarada qashinka ah ee la qallajiyey iyo qoryaha ayaa la gooyaa haddii loo baahdo.
Qalitaanka Asplenium waa lagama maarmaan u ah beeritaanka habboon iyo joogto ah. Tan waxaa la sameeyaa sanadkiiba ama labadii sanaba mar. Marka beerista, xididdada dhintay waa la saaraa, iyo baahida nololeed ee loo qabo in si taxadar leh loo xalliyo, si aanay u dhaawacmin, maadaama ay koraan si tartiib tartiib ah, burburkooduna wuxuu keenayaa jirro sii dheeraaday ee geedka. Asplenyum ayaa lagu shubaa weelal gacmeed oo leh dabacsan oo qoyan.
Cayayaanka waaweyn iyo cudurrada asplenium
Cayayaanka ugu muhiimsan ee lafaha asturiinka gudaha ah waa scythe, caarada caarada ah iyo dulsaarrada nematode. Si loo burburiyo cayayaanka qashinka iyo cayayaanka, waxaad isticmaali kartaa cayayaanka "Aktellik", "Fitoverm", "Fufanon" oo ah heerka 1-2 ml halkii litir oo biyo ah. Way adag tahay in la dagaallamo nematodes, kiimikada ma caawin doonto halkan, maadaama ay dulinka ku dhex fiiqan maqaarka caleen. Xaaladdan oo kale, manjooyin kaliya oo lagama maarmaan ah ayaa lagama maarmaan u ah in si buuxda looga saaro dhammaan qaybaha dhirta burburay. Cudurada inta badan, Aspiranta waxay saameysaa kalluunka ama caleemaha rootiga, taas oo dhacda marka waraabinta aan habooneyn. Guud ahaan, inta badan dhibaatooyinka dhirtaas waxay la xiriiraan xadgudubka qaabka daryeelka, tusaale ahaan:
haddii talooyinka caleemaha fermiska ay qalalaan oo ay dhintaan, tani waxay muujinaysaa la'aanta qoyaan.
dhibco madow ee caleemaha ayaa tilmaamaya in ashtenium uu yahay mid aad u kulul, ama in ka badan bacriminta;
haddii xaashida la jarjarey, waa qabow;
haddii caleemuhu ay noqdaan kuwo caan ah, oo ku dhawaad ​​hufan, waxay la macno tahay in iftiinka xad-dhaafku uu ku dhufanayo qoyaanka, waa in dib loo habeeyo hooska.